XOG: Saamiga Tikidhada Ay Heli Doonan Labada Kooxood Ee Finalka Champions League Ku Wada Ciyaari Doona Oo La Shaaciyay Iyo Xog Aad U Baahan Tahay In Aad Ogaato. – GOOL24.NET
XOG: Saamiga Tikidhada Ay Heli Doonan Labada Kooxood Ee Finalka Champions League Ku Wada Ciyaari Doona Oo La Shaaciyay Iyo Xog Aad U Baahan Tahay In Aad Ogaato.
Real Madrid ayaa xalay u soo baxday finalka UEFA Champions League waxayna caawa daawan doontaa midka soo bixi doona kooxaha Liverpool iyo AS Roma oo Stadio Olympico ku ciyaari doona kulanka lugta labaad ee afar dhamaadka UEFA Champions League, markaas oo la ogaan doono labada kooxood ee xili ciyaareedkan iskugu iman doona finalka Champions League.
Kulanka finalka Champions League ayaa la ciyaari doonaa May 26,2018 iyada oo uu marti galin doono garoonka NSC Olimpiyskiy ee ku yaala magaalada Kiev ee caasimada dalka Ukraine. Real Madrid oo labadii sano ee ugu danbayay koobka Champions League ugu soo guulaysatay magaalooyinka Milan iyo Cardiff ayaa markale iskeentay Kiev.
Real Madrid ayaa hadda og in ay kulanka NSC Olimpiyskiy Stadium ee magaalada Kyiv ay ku heli doonto17,000 kun tikidh iyada oo la shaaciyay saamiga ay labada kooxood ee finalka iskugu yimaadaan heli doonaan. Garoonka qaadkiisa waa 63,000 kun oo kursi, waana garoonkii lagu qabtay finalkii tartanka Euro 2012 ee si wadajir ah loogu qabtay Poland iyo Ukraine sanadkii 2012.
UEFA waxey tikidhada qeybisay 16-kii March,2018, waxaana intaas dheeri ah in 17,000 kun ay koox walba oo finalka tagta ay heleyso, sidoo kalana 6,700 tikidh ayey goor hore ku iibiyeen webkooda iyada oo dad waynaha kubbada cagta aduunka loo soo bandhigay.
40,700 kun oo tikidh ayaa iib ahaan loo qeybin doonaa iyadoo loo maraayo labada kooxood iyo sidoo kale tikidhada goor hore laga iibsaday internet-a. UEFA ayaa haddaba ku mashquulsan diyaarinta iyo agaasimada kulanka finalka Champions League NSC Olimpiyskiy Stadium.
Sidoo kale kuraasta qaar waxaa fariisan doono gudoonka UEFA, madax ka socota xiriiro kala duwan, shirkadaha maalgaliya tartanka, dhamaan saxaafadda iyo si gaar ah warbaahinta leh xuquuqda baahinta tartanka.
Tikidhka ugu raqiisan waa 70 Euro, halka kuwa ugu qaalisan ay yahiin: 160 Euro, 320 Euro ilaa 450 Euro – waxeyna u kala qaalisan yahiin kuraasta sida ay u kala fiican yahiin.
Waxaa jirta xidhmo dhalinyarada ah oo lagu heli karo 140 Euro, waxaana ku jira tikidh qaangaadh ah iyo mid caruur ah 14-sano jir. UEFA ayaa tikidhada UEFA Champoins League u samaysay darajooyin qiimo ahaan iyo da’ ahaanba kala duwan.
Sidoo kale dadka naafada ah waxey ku galayaan 70 Euro, waxaana bilaash loogu ogolaanayaa qofkii ku riixi lahaa gaariga uu saaran yahay. UEFA ayaa doonaysa in ay dhiiro galin wayn u samayso dadka naafada ah oo barnaamijo badan sare ugu soo qaado.
Galabkii talaadada waxaa la iibiyay dhawr tikidh oo heer sare ah, 12-tikidh oo qiimo ahaan u dhaxeeya 150,000 Euro kuwaas oo fariisanaya meel VIP ah iyo sidoo kale 1,500 Euro oo lagu heli doono cunto ka hor iyo kadib kulanka.